Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Sheegay in Hub ka dhigista Muqdisho Cidna u Daba Fadhiisan Doonin (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Caasimadda Muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday howlgal hub ka dhigis ah oo ay sameenayeen ciidamo isku dhaf ah oo katirsan dowlada Soomaaliya, kuwaasi oo hubka ka qaadayay ciidamada hubeysan iyo maleeshiyaadka aan cidna ka amar qaadan ee dhex wareegaya magaalada.
Howlgalkan ayaa cabsi badan ku beeray hogaamiyaal iyo Siyaasiyiin Muqdisho hub badan ku heestay, waxa ayna hada bilaabeen in hubkooda ay kala baxaan magaalada Muqdisho si uu uga nabad galo hubkooda.
Siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee hubka kala baxay magaalada Muqdisho ayaa u diray hubkooda gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhaxe gaar ahaan magaalooyinka Afgooye, Balcad iyo Jowhar .
Hubka ugu badan ee magaalada Muqdisho laga saaray ayaa u badan qoryaha Dhashiikaha ee saaran gaadiidka Cabdi Billaha iyo sidoo kale qoryaha loo yaqaan Dabajeexa iyo baasuukaha.
Ciidamada Xasilinta magaalada Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay si xoogan u uruurinayay hubka sida micnodarada ah loogu haysto gudaha magaalada, waxaana caasimadda Muqdisho sadex maalin kadib laga dareemayaa neecaaw degenaansho ah.